WIFI လေလတ်ဆတ်သောဝှက်ထားသောကင်မရာနှင့်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်၊ ၇၀ နာရီမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ၁၀၀ နာရီ standby (SPY70) | OMG Solutions
TOP SPY လျှို့ဝှက်ကင်မရာအသံမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ရုံး၊ အိမ်၊ အတွင်း / အပြင်တံခါးများအတွက်ရှာဖွေစက် (စင်ကာပူ / ဂျကာတာ)
Whatsapp: စင်္ကာပူ + 65 8333-4466, ဂျကာတာ + 62 81293-415255
က Man Down / လုံအလုပ်သမားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်
70hrs standby (SPY100) WIFI Air ကိုအမြင်ကြည်လင်စေရန် Hidden ကင်မရာနှင့်ဗီဒီယို Recorder, 088hrs မှတ်တမ်းတင်,
(1) Monitor များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအိပ်ခန်း, တိုက်ခန်းများ, မိသားစုခန်း, ပျိုးခင်း, ကားဂိုဒေါင်, တည်းခိုခန်းများနှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်လုံခြုံအတွင်းပိုင်း။
(2) တရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီကနေ့ကင်မရာ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မော်နီတာသို့မဟုတ်သင့်သက်ကြီးရွယ်အိုဆွေမျိုးများဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ကျန်းမာဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်။
အဆိုပါအသစ်နှစ်လုံးကိုလည်း chip ကိုကြိုးမဲ့ဖြေရှင်းချက်မပြတ်မတောက်, တည်ငြိမ် WIFI connection ကိုဆောင်တတ်၏။
ဒါဟာကင်မရာရဲ့ Wi-Fi ထိရောက်သောအကွာအဝေးကိုသင်အလိုတော်မှာသင့်ရဲ့ကင်မရာကိုနေရာချခွင့် 30m အကြောင်းပါ။
ဗီဒီယိုကြည်လင်ပြတ်သားမှု: စစ်မှန်သော HD ကို 1280x720P, high-definition ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုယူခဲ့
built-in 4000 mAh ဘက်ထရီလီသီယမ်ဘက်ထရီ: 400 မိနစ်မှတ်တမ်းတင်ရေရှည်တည်တံ့။
MAX SD ကဒ်များ 128GB မှတက်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုများသော Functions များ
အလွန်သေးငယ်တဲ့မှန်ဘီလူးနဲ့ volume, ဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူသတိပြုမိခံခြင်းမရှိဘဲဝှက်ထားလို့ရပါတယ်။ ရုံး, ခရီးသွား, ဆိုင်, ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုများအတွက်လုံခြုံနေအိမ် (ကလေးများ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, ကလေးထိန်း, အဟောင်းကလူ) ။
loop မှတ်တမ်းတင်နောက်ဆုံးအတူအသက်အကြီးဆုံးဖိုင်ကို overwrite လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်နေပါတယ်။
motion ထောက်လှမ်း: ရွေ့လျားမှုတွေ့ရှိသောအခါကင်မရာကိုအလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်စတင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါထုတ်ကုန်ပိုမြန်, အချိန်-စားသုံးတိုတောင်း charging, 2.0 မြန်နှုန်းမြင့်အားသွင်း interface ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
မိုဘိုင်းခိုးအားဖွငျ့ကိုအားသွင်းဖို့ plug ။
ပူနွေးသောအကြံပေးချက်များ: ဤခလုတ်တစ်ခုကကင်မရာဖြစ်ပါတယ်သောကြောင့်, cable ကိုခေါက်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြဘူးပါ။
အဆိုပါကင်မရာဖြင့်ချိတ်ဆက်: တ Connect WIFI မှတဆင့်ဒေသခံကြည့်ရှုသည်: အကြောင်းကြောင့်2နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်, အဆိုပါ Real-time ကိုဗီဒီယိုရှုမြင်ကြသည်။ အခြားအရှည်လျားအကွာအဝေးဝေးလံသောမြင်ကွင်းဖြစ်ပါသည်
ရိုးရှင်းသော APP ကိုစစ်ဆင်ရေး interface ကိုအသုံးပြုဖို့ပိုပြီးအဆင်ပြေပိုမိုရိုးရှင်းပြီးထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဗီဒီယိုကြည်လင်ပြတ်သားမှု: စစ်မှန်သော HD ကို 1280x720P, high-definition ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးအယူလာပါ။
DIY Button ကိုမှန်ဘီလူး:
သငျသညျဖုံးကွယ်နှင့်သယ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ကင်မရာမှန်ဘီလူးအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသော button ကိုဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ရန် option ပေးခြင်းသည်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များအတွက် button ကိုဦးထုပ်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ။
ထောက်ပံ့ မက်စ်အတွက် 128GB အသေးစား TF Card ကို (မပါ)
သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒေသခံများနှင့် remote connection, 30m အကြောင်းကို Wi-Fi အကွာအဝေး, Password ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုထောက်ခံခဲ့သည်။
သိကောင်းစရာများ: WIFI OR မိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ယက်ကို: ဝေးလံသောကွန်နက်ရှင်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဆဲလ်ဖုန်းအင်တာနက် access လုပ်နိုင်သေချာသည်။
motion ထောက်လှမ်း: ရွေ့လျားမှုတွေ့ရှိသောအခါကင်မရာကိုအလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်စတင်ပါလိမ့်မည်။ နှင့်ရီးရဲလ်အချိန်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အတူ, ဒီ mini ကို gadget ကသစ္စာရှိရှိ Real-time နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကဗီဒီယိုဖိုင်အရှည် is1 minute.Support Real-time video recording ကိုသင်၌ uninvited ဧည့်သည်ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းတင်လိမ့်မယ်။
ဗီဒီယိုကြည်လင်ပြတ်သားမှု: စစ်မှန်သော HD ကို 1280x720P,
lithium ဘက်ထရီ: 4000 mAh ဘက်ထရီ
ရေရှည်တည်တံ့သောဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း: 400 မိနစ်.
ကင်မရာရဲ့ Wi-Fi signal ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်မိုဘိုင်းဖုန်း / Tablet ကို / PC ကိုချိတ်ဆက်နေသည်။ သငျသညျအခြိနျမှာကင်မရာကိုမှဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထုတ်လွှင့်ရန်မလိုအပ် Wi-Fi router ကို။
5182 စုစုပေါင်း Views စာ 17 Views စာယနေ့တွင်
စင်္ကာပူထိပ်တန်း 500 Enterprises 2018
မက်ဆေ့ခ်ျကို (သူလျှိုကင်မရာထုတ်ကုန်များ) *
ဆောင်းပါးများ - သူလျှိုကင်မရာ
ဦးထုပ် / ဟက်
ကားတစ်စီး Key ကိုကင်မရာ
ဖလား / ရေ Bottle သကင်မရာ
USB thumb drive ကင်မရာ
H.264 ဗီဒီယို Compression ကို motion ထောက်လှမ်းခြင်း ညဥ့်မျှော်မှန်းချက် WIFI Remote Access ကို
တစ်ဦးကဝှက်ထားသောကင်မရာသို့စသူလျှိုကင်မရာနေဆဲဘာသာရပ်များ '' ဗဟုသုတနှင့်သဘောတူညီချက်မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီ၏ဗီဒီယိုကို (အများအားဖြင့်အသံနှင့်အတူကြွလာ) မှတ်တမ်းတင်ဖို့အသုံးပြုကြောင်းသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ သူလျှိုကင်မရာများအဓိကအားဖြင့်စောင့်ကြည့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်ပေမယ့်တစ်ချိန်ချိန်ကစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်းအသုံးပြုပါတယ်။
hidden ကင်မရာများကြောက်မက်ဘွယ်သောရက်စက်မှုနှင့်လျစ်လျူရှုစောင့်ရှောက်မှုဖော်ထုတ်ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ဝှက်ထားသောသူလျှိုကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်များအလွန်ခက်ခဲသည် - သင်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် privacy ကို၎င်းတို့၏ပိုင်ခွင့်ကိုလေးစားအကြားဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။